Glaxy or Acer - MYSTERY ZILLION
Glaxy or Acer
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းလို့ပါ...... Samsung Galxy Tab နှင့် Acer Tab ဘယ် Brand ၀ယ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ အကြံပေးကြပါဦး..
Samsung Galaxy may be better than Accer. Most of the users are using samsung galaxy.
samsung galaxy tab ပဲပိုကောင်း မှာပါ။ တော်တော် များများ တောင်သုံးလာပြီ။ Acer tab ကတော့ သုံးတဲ့ လူ တော်တော် နည်းသေးတယ်ဗျ။
Thank You Bro for Advice me